‘नगरेको कामको जस लिन हामी खोज्देनौं’ – थापा (अन्तर्वार्ता) – NepalayaNews.com
‘नगरेको कामको जस लिन हामी खोज्देनौं’ – थापा (अन्तर्वार्ता)
६ मंसिर २०७४, बुधबार ०६:४०
कास्कीका क्षेत्र नम्बर १ का २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा जिताएर पठाएकै हुन् । अब फेरि यहाँलाई किन भोट हाल्ने ?
मेरो योगदान, मेरो संघर्ष र मेरो आवश्यकतालाई महसुस गरेका मतदाताले मलाई जिताएर पठाएका हुन् । हामीले त्यसबेला भोट माग्दा नै भनेका थियौं, हामी पूरै संविधान निर्माणमा दत्तचित्त भएर लाग्नेछौं । सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा हामीले संविधान बनाइछाड्यौं । मैले कमसेकम मैले यो गर्छु, त्यो गर्छु भनिन, त्यो क्षेत्र नम्बर १ का जनता साँछी छन् ।
बरु गरिसकेपछि आउँला, गर्न सकिन भने क्षमा माग्न आउँला भनेको थिएँ । यो संविधान निर्माणमा प्रचारमोह नराखीकन लागें । अब म भन्छु, मलाई भोट दिनुस्, समृद्धिका लागि लड्नेछु । मलाई भोट दिनुस्, विकासको पक्षमा लड्नेछु । प्रदेश नम्बर ४ लाई देशकै उत्कृष्ट र समृद्ध बनाउन म सधैं लागिरहनेछु ।
यसअघिको संविधानसभाको निर्वाचनमा एमालेसँग यहाँ झिनो मतले विजयी हुनुभएको थियो । यसपाली एमाले र माओवादी एक भएका छन् । यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
चुनावका बेला तालमेल गर्ने कुरालाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ । तर अभिष्ट के हो ? उद्देश्य के हो ? भनेर केलाउँदा प्रशस्त आपत्तिजनक कुरा पाउँछौं । त्यसैले हामीले यो गठबन्धनलाई अपवित्र गठबन्धन भन्छौं । संसदीय शासन प्रणाली हाम्रो मुटुभन्दा प्यारो छ भन्ने कुरालाई छोडेर अर्कै प्रकारको शासकीय स्वरुपमा जाने कुरा आएको छ, त्यो आपत्तिजनक छ । म मान्दिन कम्युनिस्ट गठबन्धनले २ तिहाइ ल्याउँछ र संविधान संशोधन गर्छ । तर यो गठबन्धनको उद्देश्य गलत छ ।
निर्वाचन भन्ने कुरा नै यस्तो हो कि अहिलेकाहिँ धेरै शक्ति मिलेर प्राप्त गर्न नसकेको नतिजा एक्लै पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । हामी २ शक्तिसँग निर्वाचनमा लड्नुपथ्र्यो । अब एउटैसँग लडे पुग्ने भयो । वाम गठबन्धनबाट विचलित हुने, प्रभावित हुने भन्ने कुरा नै छैन । कांग्रेस जहिले पनि जनताको मनमा छ, कांग्रेसले जित्छ ।
जनता फेरबदल चाहन्छन् । क्षेत्र नम्बर १ मा हेर्ने हो भने २०४८ मा हामीले जित्यौं, २०५१ मा हा¥यौं । २०५६ मा हामीले जित्यौं, ६४ मा हामीले हा¥यौं । २०७० मा फेरि हामीले जित्यौं । बीचमा एक उपनिर्वाचनमासहित हिसाब गर्दा हामी ३ चोटी हारेका छौं, ३ चोटी जितेका छौं । अब फेरि पालो हो । हामी जित्छौं ढुक्क छ ।
तपाईं वर्तमान कानुनमन्त्री, एमालेका उम्मेदवार खगराज अधिकारी पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री । दुवै जना स्थानीय तहमा भिजेका नेता । यो प्रतिस्पर्धालाई धेरैले रोचक ढंगले हेरेका छन् । तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
उहाँ स्वास्थ्य विमाका विषयमा बोल्दै हिँड्नुभएको छ । गगन थापाले गरेका प्रयासहरुलाई आफूले गरेको भन्दै हिँड्नुभाछ । मलाई नागरिकहरु भन्दैछन्, गगन जीलाई नै ल्याएर बोल्न लगाउनुप¥यो । मैले त्यसो गर्नुपर्दैन भन्दैछु । नगरेको काम पनि मैले गरें भन्दै उहाँ प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ । म त अहिले मन्त्री छु ।
मैले भोट बढाउन यो भनिरहेको छैन । भन्नेहरुले मलाई बारबार भनिरहेका थिए, कानुन बनाउँदैन र निर्वाचन पनि हुन दिँदैन । तर, मैले भनेको थिएँ, १ बन्छ, २ बन्छ, ३ बन्छ । हामीले त्यो कानुन बनाइ छाड्यौं र अहिले चुनावी मैदानमा छौं । सबै तहको कानुन निर्माण गरेर चुनाव रोकिँदैन हामीले भनेका थियौं ।
मैले बनाउने होइन कानुन, संसदले बनाउने हो तर मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय नै यो यो कानुन निर्माणको नेतृत्वदायी भूमिका थियो र मैले त्यही भूमिका निर्माण गरें ।
जंगबहादुरको पालामा निर्माण भएर २०२० सालमा संशाधन भएको मुलुकी ऐन अहिलेको वर्तमान परिस्थिति अनुसार अब केही दिनमै लागु हुँदैछ । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिर्वतनको युगमा सापेक्षअनुसार ऐतिहासिक फड्को मार्दैछौं । यो धेरै मन्त्रीले ल्याउन खाजेर पनि ल्याउन सकेका थिएनन् । इतिहासले सम्झने छ मलाई ।
यो कुरा मैले अहिलेसम्म जनतालाई भनेको छैन खुल्ला रुपमा भने खगराज जीले गगन थापाका पालामा भएका काम मैले गरेको भन्दै हिँड्नुभएको छ । त्यसैले हामी कोकस्तो भन्ने विषयमा तुलना नगरौं । मैले यो प्रतिस्पर्धालाई रमाइलो तरिकाले हेरेको छु । जनताले मलाई जिताएर निश्पक्ष, निस्कपट भएर काम गर्ने फेरि एकपटक मौका दिनेछन् ।
सधैं गुनासो र नेतालाई पनि भन्ने बाटो थियो, स्थिर सरकार भएन र हामीले विकास गर्न सकेनौं । जब जनताले नै कसैलाई स्थिर सरकारका लागि बहुमत दिएर पठाए भने किन आपत्ति जनाउने ?
कसैले हामी २ तिहाइ ल्याउँदै छौं र संविधान संशोधन गर्दै छौं भनेर भन्छ भने त बुम¥याङमा पर्नेवाला छैन । किनभन्दा निर्वाचन प्रणाली मिश्रित प्रणाली अपनाउने ? प्रत्यक्षबाट ४० र समानुपातिबाट ४० भनेर ल्याउने, शक्तिको एकाधिकार कसैलाई नहोस् भन्ने सिद्धान्त अपनाएर सबै सनाठूला पार्टीको सहभागिता होस् भनेर निर्वाचन प्रणालीमा जाने ? यस्तो पनि मिल्ने कुरा हो ।
कुनै पनि नेताले, कुनै पनि पार्टीले २ तिहाई ल्याउँछु भन्यो भने किनारमा बसेर अध्ययन गर्नेले खिसीटिउरी गरेर मुस्कुराउँछ । यो हुँदै नहुने कुरो हो ।
वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका छन् तर पनि कास्की कांग्रेस एक भएर चुनावमा जान सकेन नि ?
छिटफुट त्यस्तो घटना भए होलान् । तर, हामी एक छौं । तपाईंले बागी उठेकाप्रति लक्षित गर्नुभएको होला । नरेशशंकरको सवालमा उहाँले ठूलो गल्ती गर्नुभएको हो । उहाँले लक्का जवान हुँदा टिकट पाउनुभएको थियो । उहाँभन्दा कति ज्येष्ठ राजनीतिकर्मीले चित्त दुखाए होलान् नि तर उहाँलाई जिताउन लागे ।
एकपटक उपमेयर जित्नुभयो फेरि मेयरको टिकट पाउनुभयो । हाम्रो पार्टीमा टिकट पाउनु ठूलो कुरा हो नि जित्दैन त उसको कुरा हो । घातअन्तर्घातको कुरा होइन साथी हो, एक भएर जाने हो भनेर हामी त १ छौं ।
समाधान दैनिक बाट
टेक्सासमा दुई प्रहरी अधिकारीमाथि गोली प्रहार, हत्याराद्वारा आत्महत्या ६ मंसिर २०७४, बुधबार ०६:४०
टेस्लाले घटायो मोडल वाई एसयूभीको मूल्य ६ मंसिर २०७४, बुधबार ०६:४०
योग्यतामा आधारित आप्रवासन प्रणाली स्थापनाको लागि कार्यकारी आदेश ल्याउँदै ट्रम्प ६ मंसिर २०७४, बुधबार ०६:४०